အဆိုတင်သွင်းတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်မြင့်က ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ပြတာ၊ သုံးစွဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိန်ကာလ တရပ်အတွင်း ပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်အောင် ထိန်းချုပ် စောင့်ကြည့်သွားမယ့် အဖွဲ့တရပ် ဖွဲ့စည်းဖို့ အဆိုတင်ခဲ့ပေမယ့် ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်တဲ့ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရတယ်လို့ အာအက်ဖ်အေကို ပြောဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို ခွဲဝေ သုံးစွဲနေသလဲ ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကို ဆွေးနွေးခွင့် မရဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
အခု ကျင်းပနေတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ အမတ်တွေ ဆွေးနွေး တင်ပြတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်ကို အစိုးရသတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခွင့်မရဘူးလို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တိုင်းရင်းသား အမတ်တွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ဒီႏိုင္ငံမွာလမ္းသြားရင္နဲ ့ေတာင္ေတြ ့ေနရတဲ့သေတာင္းစားဦးထုပ္ျဖ ူေတြရယ္ဒီေလာက္အရွဳံးေပၚေနတဲ့
သူ ့လစာကရတာမွ၆၀၀၀၀မွ၁၀၀၀၀၀ေပါ့ငါးသိန္းတန္ထြက္လို ့
အဲေလာက္လည္း ေၾကာက္စရာမလုိပါဘူး.. ကိုယ္မွန္တယ္ထင္ရင္ စရင္းျပနုိင္ရမွာေပါ့...
မေၾကာက္ပါန႔ဲ ။ ။
Aug 30, 2011 05:22 AM
No Suprise at All. Who,the most CORRUPTED on the earth, will allowaCHECKING on Them?
Aug 29, 2011 09:02 PM